Myanmar Digital Marketing | Internet Marketing Services - WebsiteDesign.com.mm
လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်ပတ်အတွင်း ကမ္ဘာပတ်ဖို့ မလွယ်ကူလှပေမဲ့၊ ကိုယ့်စီးပွားရေးရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကတော့ နည်းပညာအကူအညီနဲ့ စက္ကန့် ပိုင်းအတွင်း ကမ္ဘာပတ်လို့ ရပါတယ်။ Customer ကို အပြေးအလွှားလိုက်ရှာရတဲ့ခေတ် ကုန်ဆုံးပြီး၊ Customer က လူကြီးမင်းဆီ တည့်တည့်မတ်မတ် ရောက်ရှိလာစေတဲ့ အင်တာနက်ခေတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက လူကြီးမင်းတို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော Facebook, Google (SEO / SEM / Display Banner/ Remarketing), Email Marketing, Youtube Advertising စသော အင်တာနက်တွင် ကြော်ငြာခြင်းဝန်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးကို စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Facebook တွင် ကြော်ငြာခြင်း
Facebook ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အသုံးပြုသူသန်းပေါင်း ၁,၈၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူဦးရေတိုးတက်များပြားလာတာနဲ့ အမျှ Facebook ကွန်ယက်ကို အသုံးပြုပြီး ကြော်ငြာခြင်းမျိုးဟာလဲ အထူးခေတ်စားလာပါတယ်။ ကျနော်တို့ Agency က Facebook ကိုအသုံးချပြီး လူကြီးမင်းရဲ့လုပ်ငန်း ထိရောက်အောင်မြင်မှုအရှိဆုံး ဖြစ်အောင် အကြံပြုဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။
SEO ဆိုတာကတော့ လူကြီးမင်းရဲ့ Website က ဘာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Google က အပြည့်အဝနားလည်ပြီး၊ ရှာဖွေသူတွေတွေ့ အောင်လို့ ထိပ်စာမျက်နှာဆီသို့ သဘာဝအတိုင်းတွန်းပို့ ပေးခြင်း လုပ်ငန်းရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောကတော့ လူကြီးမင်းရဲ့ Webiste ဟာ ထိပ်စာမျက်နှာမှာ မကြာခဏပေါ်လေ၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူဦးရေ များလာလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူဦးရေများလာတဲ့အတွက် Customer တိုးပွားလာပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များကို တည်ဆောက်နေသော ကျနော်တို့ Agency မှ လူကြီးမင်း Website အတွက် အောင်မြင်တဲ့ SEO ဝန်ဆောင်မှုကို အာမခံနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ငြာကို တစ်စုံတစ်ယောက်က Click နှိပ်လိုက်တိုင်း ကြော်ငြာရှင် (Website ပိုင်ရှင်) က Google သို့ ပိုက်ဆံပေးချေရသော ကြော်ငြာခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်များနိုင်တဲ့ ကြော်ငြာခြင်းမျိုး ဖြစ်ပေမဲ့ ချက်ချင်းလက်ငင်းရလာဒ် ကိုအဓိကထားသူတွေအတွက် အထိရောက်ဆုံး ကြော်ငြာခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Agency မှ လူကြီးမင်း Website အတွက် SEM ဝန်ဆောင်မှုကို အာမခံနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Display Banner / Remarketing ဝန်ဆောင်မှု
တစ်ချို့Website နဲ့ Mobile Application တွေမှာ နှဖူးစီးရုပ်ပုံ၊ ဆိုဒ်စုံ၊ ဒီဇိုင်းစုံနဲ့ ကြော်ငြာ (Banner) လေးတွေ မြင်ဖူးကြမှာပါ။ အဲဒါကို Display Banner Marketing လို့ခေါ်ပါတယ်။ လူအများစုမြင်အောင် အချိန်ပြည့် ကြော်ငြာနိုင်တဲ့အတွက် Promotion တွေ၊ Branding တွေ လုပ်ချင်သူတွေအတွက် အထူးပင်ကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကြော်ငြာကို ကိုယ့် Customer အုပ်စုကိုပဲဦးတည် ကြော်ငြာနိုင်တဲ့အတွက်လဲ ကြော်ငြာစရိတ်တွေလေလွင့် ဖိတ်စင်ခြင်းမျိုးလဲ မရှိပါဘူး။ Remarketing ဆိုတာကတော့ နည်းပညာအရ Display Banner ထက် တစ်ဆင့်ပိုမြင့်တဲ့ ကြော်ငြာခြင်းမျိုးပါ။ ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ Website ကိုတစ်ခေါက်လာလည်ဖူးသူရဲ့နောက်ကို ကိုယ့်ရဲ့ (Banner) ကြော်ငြာ တောက်လျှောက်လိုက်လံပြသ ကြော်ငြာနိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Agency မှ လူကြီးမင်းရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Banner/ Remarketing ဝန်ဆောင်မှုကို စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။
Youtube ဆိုတာ Google က ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအကြီးဆုံး Search Engine ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အချိန် ၁ မိနစ်တိုင်း Youtube Video ကြည့်ရှုမှုပေါင်း ၂.၈ သန်းရှိပါတယ်။ (REF: Smart Insights Official)
မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ Youtube ကြည့်ရှု့သူအရေအတွက် တစ်နေ့တစ်ခြားတိုးတက်များပြားလာတဲ့အတွက်၊ ကိုယ့်ရဲ့ Branding တွေ၊ Promotion တွေကို ယခင်က TV မှာကြော်ငြာသလို၊ Youtube မှာ ကြော်ငြာခြင်းဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Agency မှ လူကြီးမင်းရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Youtube Advertising ဝန်ဆောင်မှုကို (Video ရိုက်ကူးတည်းဖြတ်ခြင်းမပါ) စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။
Email Marketing ဝန်ဆောင်မှု
Email ဟာ ဈေးသက်သာပြီး သိပ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Marketing ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ E-Commerce Site တွေ၊ လူသိများတဲ့ Brand တွေ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေ၊ သတင်းမီဒီယာစသည့် Customer တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ အမြဲတစေတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းများအတွက် အထူးပို၍ သင့်လျော်ပါတယ်။ ထောင်သောင်းများစွာသော Email အသုံးပြုသူတွေဟာ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း Email ပေါင်းများစွာကို လုပ်ငန်းရေးရာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများအရ အသုံးပြုနေကြရပါတယ်။ Customer တစ်ဦးချင်းစီကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်တဲ့ Marketing ဖြစ်မျိုးပြီး၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော Email အသုံးပြုသူများဆီသို့ကိုယ်ပေးပို့ချင်တဲ့ စီးပွားရေးအကြောင်းအရာကို တစ်ကြိမ်တည်း၊ Click တစ်ချက်တည်းနဲ့ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။(Official)
ဘယ်အရပ်ဒေသက ဘယ်သူက ကိုယ့်ပေးပို့တဲ့အီးမေး(လ်) အကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်တစားဖွင့်ဖောက် ဖတ်ရှုပြီး၊ ဘယ်သူတွေကိုယ့်ရဲ့ Customer ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာသာ အေးအေးဆေးဆေး စောင့်ကြည့်နေရုံပါပဲ။
Internet Marketing Services in Myanmar
Internet advertising or Digital Marketing is more targeted than some traditional media, ensuring that the most relevant audiences see your messages. It allows you to reach significantly more customers than traditional advertising media atabetter cost. It is ideal for businesses with all small and large-scale distribution capabilities. The more people your business serves, the most cost-efficient Internet advertising can be.
Facebook is one of the most popular social networks with approximately 1.9 billion users in 2017 worldwide. We offer effective and efficient Facebook advertising in Myanmar with our expertise to generate tremendous exposure for your ads.
SEO (Search Engine Optimization) is an on going process of optimizing your website to gain more visibility in the search engines with the search terms (Keywords) to increase the exposure and traffic to your site. Simply, the more frequent your site appears in the search results list, the more the visitors you gain from Google.
SEM Services (Google Adwords)
Search Engine Marketing (SEM) or Google Adwords does the promotion of your websites by increasing the visibility in Search Engines Result Pages (SERPs) through Advertising. It is also called Pay Per Click (PPC) since it cost to you (typicallyawebsite owner/ advertiser) when the ad is clicked. You will need to bid on keywords or key phrases relevant to your business’s target market.
Display Banner / Remarketing Services
GDN (Google Display Banners) helps you reach the people while they’re browsing their favorite blogs, websites, mobile websites and applications. This channel is the best to generate awareness about your products/ services to the right audience at the right time. Remarketing allows you to position targeted ads in front ofadefined audience that had previously visited your website - as they browse elsewhere around the Internet. This isavery cost-effective form of advertising for reminding visitors to purchase your offering(s) and increasing brand awareness at the same time.
YouTube ads can be targeted your potential customer via, keywords, demographic, interests, trending topics and even In-market audiences. YouTube advertising channel usually builds loyalty and your brand image.
EDM (Email Marketing) is suitable for every business, whereas some E-commerce stores, corporate businesses, Hotels & Tourism and subscription based media channels, etc; are more. In fact, Email hasalarger reach and it delivers your crafted message, ultimately that drives conversions. We have million of Email users sending emails every day for both personal and commercial purposes. It is very cost effective direct marketing strategy since it is being sent asacommercial message toagroup of people by using email. We can create an impressive email with your marketing message and blast out to thousands of your subscribers at one goal. Just sit down and watch how many recipients from which location response and how many of them convert into your customers.